OCEANIA | RayHaber | raillynews
Wingman Onye Ukwuu Kwesịrị Ntụkwasị Obi nke Abụọ N’iru ọganiihu, Ighalo Mgbanarị Ọgbọelu Na-enweghị Mgbako
Ndị otu ụlọ ọrụ Australia, nke ụlọ ọrụ U.S. Boeing na-eduzi, rụzuru ụdị ọrụ nchekwa mbụ nke Loyal Wingman Unmanned Fighter Aircraft (UCAV) ma gosipụtara ya ndị Australian Air Force. Mepụtara Boeing na ụlọ ọrụ ndị Australia na ndị haziri [More ...]
Melbourne na-arụ ọrụ Tramway
Melbourne, isi obodo steeti Victoria, nke nwere obodo ịbụ obodo nke abụọ kachasị na Australia, malitere iji ike anyanwụ rụọ ọrụ dum tram nke obodo ahụ. Neoen Numurkah Solar Power Plant, nke emepere izu gara aga, [More ...]
Ihe Anyị Na-Amaghị: Netiyo Tram Long nke ụwa
Networkgbọala eletriki ụgbọ ala kachasị ogologo n’ụwa dị na Melborn, Australia. Osisi Melborn Tramway Platin, bụ nke chebere nnukwu ọkụ eletrik na ọkụ eletrik eji ya site na iji ike anyanwụ na-enye okporo ụzọ ọkụ eletrik, bụ 250km ogologo. [More ...]
Ejiri ụgbọ oloko Sydney Melbourne 2 nwụrụ na Australia
Agbọ oloko na-ebu ndị njem n'Australia dara n'okporo ụzọ ahụ. Edeputara na mmadụ abụọ nwụrụ n'ihi ụgbọ oloko ahụ bu ndị njem 160 mebiri ma kwatuo. Sydney - Melbourne Express, na-eme ihe na mpaghara obodo 2 na Australia [More ...]
Thales Enwee Mmalite Mbara Mpụga ụzọ ụgbọ oloko na Australia
Thales meriri nro maka ịgbatị Sydney Underground gaa City na Southwest, wee banye nkwekọrịta Central Control na Nkwukọrịta. Nkwekọrịta a maka mmụba nke Sistemụ Nchịkwa na Igwe Nkwukọrịta nke Central Sydney [More ...]
Melbourne, isi obodo steeti Victoria, nke chọrọ ịbawanye ike ọ ga-emegharị emeghari site na 50 pasent, na-eji ike anyanwụ dị na-arụ ọrụ na stem dum. Melbourne bụ obodo nke abụọ kachasị na Australia. [More ...]
N’Ọstrelia, ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ̀ ndị dị n’ime ala, Rio Tinto, ewepụtala netwọk ụzọ ụgbọ elu na-arụ ọrụ nke ukwuu na robot ụgbọ ala kachasị ukwuu n’ụwa. Networklọ ọrụ ụgbọ oloko guzobere na mpaghara Pilbara nke Western Australia, ihe dị ka 800 [More ...]
Traingbọ ụgbọ mmiri na-ebupụ ụgbọ mmiri na-ebupụ na Devonport, Australia, iji gbochie ọdachi nwere ike ịdakwasị ya. Dị ka ndị uwe ojii Tasmanian si kwuo, ụgbọ oloko a na-achịkwaghị achịkwa na-akwụsịghị akwụsị na Devonport [More ...]
Ndị njem njem 16 merụrụ ahụ ka ụgbọ oloko na-eru nso na Richmond na northwest Sydney, Australia, enweghị ike ịkwụsị ma kwatuo ndị njem wee daa ihe mgbochi. Ndị uwe ojii nke New South Wales (NSW) kwuru n ’ihe mberede ahụ [More ...]
Trawa Sowa Mbara Igwe nke Mbara Igwe malitere
Traingbọ izipu ọkụ nke anyanwụ nke ụwa bidoro njem njem ya na kilomita nke 3 nke Australia. Companylọ ọrụ Byron Bay Railway malitere iji ụgbọ okporo ígwè mbụ gbalitere anyanwụ zuru ụwa ọnụ na Australia. Nke mbu [More ...]
Ulo mbu nke uwa n’enweghi njem nke mekoputara: Ulo oru China, Rio Tinto malitere iji ugbo ala mbu zuru uwa zuru ezu. Ndị ọzọ karịa mpaghara Ngwuputa, ụlọ ọrụ [More ...]
Ihe mgbakwunye nke Dayton, Ohio site na United States na-egosi isi ihe dị mkpa maka Moovit ma gosipụta na ọ bụ naanị ngwa ịchọrọ ụgbọ njem gburugburu ụwa. [More ...]
Thezọ ụgbọ mmiri nke na-eme ka ụmụaka nwee agụụ ịga ụlọ akwụkwọ kwa ụtụtụ: Ihe ndị na-eweta ezi obi ụtọ na-esikarị n’aka obere ihe dị ka nke a. Nmụ amaala Punmu bi na Western Australia, ụgbọ oloko si na gbọmgbọm [More ...]
Ndi mmadu 29 meruru aru na Australia: ndi mmadu ndi Tram na ugbokutara ndi mmadu 29 meruru aru n'ihi ogbunigwe nke tram na ugbo ala di na Melbourne, Australia. Ihe mberede na oge 8.00 mpaghara n'ogo nke na-agafe na Melbourne Zoo [More ...]
Nwatakịrị nwoke ahụ dakwasịrị n'agbata ụgbọ okporo ígwè na ikpo okwu: Na ọdụ ụgbọ oloko Cronulla nke Sydney, obere nwa ahụ dara n'etiti ụgbọ oloko ahụ na ebe ikpo okwu. Ihe merenụ gosipụtara ihe omume ahụ na igwefoto nche otu ntabi anya. Dika ozi enwetara na ihe omume a na Australia nke Sydney [More ...]
Ọstrelia, 40 ịrịọ mgbaghara maka ọdachi ụgbọ oloko Granville n'afọ gara aga: State of New South Wales (NSW) ga-arịọ mgbaghara maka ezinụlọ ndị tụfuru ndị ha hụrụ n'anya na Granville ọzụzụ ọdachi mgbe afọ 40 gasịrị. 18 Jenụwarị 1977 [More ...]
Ndị nnọchi anya Ọstrịa Austrịa TCDD: TCDD na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara ụgbọ oloko na Austria, Ankara Gar Tower Restaurant Behiç Erkin Hall ka e mere. Onye nnochite anya nke Federal Republic of Austria na nzukọ ahụ. [More ...]
Ihe oru iji mee ka inweta uzo ugbo elu Perth na Australia: A ga-ewute okporo uzo ohuru iji jikota ọdụ ụgbọ elu Forrestfield na Perth na ọkwa ọkwa nke Western Australia Transportation Authority. Mee ka ọ dị mfe ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu [More ...]
Ombgbọ oloko Bombardier batara na Australia: 16, nke mbụ n'ime ụgbọ oloko eletrik ọhụrụ nke Bombardier maka Railways Australia, rutere Brisbane, Australia na February. Thezọ ụgbọ oloko nke ga-eje ozi na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ Queensland nke Australia bụ nkeji 75 na [More ...]
A na-arụ ụzọ ọhụrụ ụzọ ụgbọ oloko maka Canberra, Isi Obodo Australia: Ejiri nkwekọrịta ụlọ ọrụ wee banye na ngalaba ụlọ ọrụ dị iche iche maka akụkụ mbụ nke obodo Canberra, isi obodo Australia. Emebere maka usoro ụgbọ okporo ọkụ dị na Canberra [More ...]
Sulfuric acid train mebiri: Na Australia, ekwuputara 200 ihe mberede na mpaghara 2 kilomita, dị ka ụgbọ oloko na-ebu puku kwuru puku sọlfọ acid rụrụ arụ. Northwest nke Queensland, Australia [More ...]
Ọgụ ọnwụ na ọnwụ na ụzọ ụgbọ oloko: Ihe a mere na ọdụ ụgbọ oloko na Australia ma weta obi ndị nọ n'ọnụ gosipụtara na igwefoto nchekwa. Nwatakịrị nwanyị na-anwa iburu ihe ụmụaka ji egwuri egwu na Flemington Station [More ...]
Ọgbaghara Ndị Ọrụ Ndị Ọrụ Melbourne: Ndị otu na-arụ ọrụ okporo ụzọ Melbourne ekpebie iku ụbọchị abụọ. Ndị ọkachamara kwuru na ụbọchị a gbara ụbọchị abụọ na ụgbọ oloko, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na ebufe obodo, nwere ike imebi okporo ụzọ obodo. ụgbọ okporo ígwè [More ...]
Aka na Sydney trainings Modernization Ego: Ebinyela aka na nkwekorita ohuru maka mmeghari ohuru nke ụgbọ oloko na mpaghara South Australia. Ego $ 96 nde aka n'etiti UGL Uniport Rail na Ngalaba Transportgbọ njem Ndịda Australia. [More ...]
A na-atụ anya 10-11 2014 ịga AusRail 2014 Railway na Conference na ngosi na Perth, Australia site na Nọvemba ruo Nọvemba. Nnukwu ngosi ụgbọ oloko kachasị na Australia [More ...]
Njem ụgbọ oloko mbụ n’agbata Damaskọs Aleppo Mgbe ọnwa abụọ gachara
Etu esi enweta koodu HES site na SMS? Ebe na otu esi enweta koodu HES? Daysbọchị ole ka koodu HES dị irè?
Mkpebi emere n'ime oke nke Normalization Usoro
Turkey, ndi n’enweghi oru ntorobia n’uwa ghuru nke ise